We.com.mm - အခုခေတ်မှာ လူအတော်များများ ဂရုပြုလာကြတဲ့ HACCP ဆိုတာ ဘာလဲ ?
အခုခေတ်မှာ လူအတော်များများ ဂရုပြုလာကြတဲ့ HACCP ဆိုတာ ဘာလဲ ?
အခုခေတ် ပြည်တွင်း ပြည်ပက ထုတ်လုပ်လျက်ရှိတဲ့ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေမှာ HACCP ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မြင်ဖူးကြမယ်နဲ့ တူပါတယ်။
HACCP ကို တစ်လုံးချင်း ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့. . .
P = Points အစရှိသဖြင့် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
HACCP ဆိုတာ အလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ ဖျားနာမှုများတွေနဲ့ ဘေးအန္တရာယ်တွေကနေ တားဆီးပေးဖို့ အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး နည်းစနစ် ဖြစ်ပါတယ်။
တာဝန်ရှိသူတွေဟာ ဒီအစားအသောက် ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဒါမှမဟုတ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါ စစ်ဆေးသိရှိထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒါအပြင် ဒီအစားအစာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အချိန်မရွေး တားဆီး၊ရှင်းလင်းပစ်တာမျိုးတွေ၊ ထုတ်လုပ်မှုကို လျော့ချပစ်တာမျိုးတွေပါ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသေးတယ်။
၁၉၆၀ မှာ HACCP ကို WHO နဲ့ NASA ထောက်ခံမှူ့အရ USA က စတင်ခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများစုမှာ HACCP ကုမ္ပဏီတွေ များလာပါပြီ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ကုမ္ပဏီမရှိသေးတဲ့အတွက် ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကိုပဲ ငှားနေရပါတယ်။
အခုခေတ်မှာဆိုရင် လူတွေဟာ ကျန်းမာရေးကို တော်တော်လေး ဂရုစိုက်လာကြပြီဖြစ်လို့ HACCP ရဲ့ Certified ဖြစ်မှသာ လုပ်ငန်းအောင်မြင်ပြီး
စားသုံးသူကလည်း ယုံကြည်စွာဝယ်ယူအသုံးပြုလာတာမျိုးတွေအထိ ရှိလာပါပြီ။
မြန်မာပြည်မှာ လူအများနဲ့သက်ဆိုင်ပတ်သတ်နေပြီး HACCP ကုမ္ပဏီကို ငှားပြီး စနစ်တကျလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုပြပါဆိုရင်တော့ City Mart Group ကို ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရပါလိမ့်မယ်။ HACCP Certificates အတွက် ငွေကြေးတော်တော် အကုန်အကျခံပြီး International Standard အတိုင်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက် အားပေးကြသူများပါတယ်။
HACCP ရဲ့ Guidelines အရ အစားအသောက်တွေကို နေရာခွဲပြီး သူ့နေရာနဲ့သူ သူ့အပူချိန်နဲ့သူ ထားရသလို ဈေးဝယ်သူဝယ်ပြီးသားပစ္စည်းတွေကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အကြီးတစ်အိတ်ထဲမှာ စုပြီးထည့်လို့မရပါဘူး။
အသားစိမ်းကသပ်သပ်၊ အေးခဲအသားကသပ်သပ်၊ အသီးအရွက်ကသပ်သပ်၊ အစာခြောက်ကသပ်သပ်၊ နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းကသပ်သပ်၊ အရည်ကသပ်သပ် ဆိုပြီး
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အေးခဲအသား နဲ့ အသီးအရွက်ရောထည့်တဲ့အခါ ပြင်ပအပူချိန်ကြောင့် ရေပျော်ပြီး အသားကပိုးမွှားတွေ တခြားကိုကူးစက်ခြင်းကို Cross-Contamination လို့ ခေါ်ဆိုပြီး အခန့်မသင့်ရင် လူကိုပါသေစေနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို HACCP က ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။
HACCP ကနေ အဓိက ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဘေးအန္တရာယ် (၄) မျိုး ကတော့. . .
၁။ အဏုဇီဝဆိုင်ရာ ( အစာအဆိပ်သင့်ခြင်းတွေမှာ တွေ့ရှိရ )
၂။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ( ဒဏ်ရာ၊ အနာတရဖြစ်မှုတွေမှာတွေ့ရှိရ )
၃။ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ( အဆိပ်သင့်ခြင်းတွေမှာ တွေ့ရှိရ )
၄။ မတည့်ပြီးဖြစ်သော ယားယံမှုဆိုင်ရာ ( ဘေးဖြစ်စေတတ်သော မတည့်မှုတွေမှာ တွေ့ရှိရ ) တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲပေးပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် ဓါတုဆေးဝါးတွေ ပေါများပြီး ရောဂါဘယတွေလည်း ထူပြောတဲ့ ဒီနေ့လိုခေတ်ကြီးမှာ HACCP ကလည်း လေ့လာထားသင့်၊ သိထားသင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ WE ရဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဗဟုသုတတစ်ခုအနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ငါးခေါင်းဟင်းရည် (၄) မျိုး
3 years ago by Yummy
အနံ့ရတာနဲ့တင် စားချင်လာစေမယ့် ပုဇွန်ငရုတ်ပွကြော်
12 hours ago by Psyche
တစ်မူထူးခြားတဲ့အရသာလေးနဲ့စားလို့အရမ်းကောင်းတဲ့ Apple Pie ပြုလုပ်နည်း
အသားလျှော့စားခြင်းကနေ ရရှိနိုင်မယ့် အကျိုးကျေးဇူး ၇ ချက်
ဆေးဖက်ဝင်အပင်တွေကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
Endgame ပြီးတဲ့နောက်မှာ မာဗယ်ကနေ ဒီဇာတ်လမ်းတွေ ထပ်ထွက်လာဦးမှာပါ